Kunezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zezinkolelo phakathi ngisho nangaphakathi kwamaqembu ahlukene e-San, kodwa kunezinto eziningi ezifanayo, ngisho phakathi kwezindawo ezihlukanisiwe kakhulu. Ngasekupheleni kwekhulu le-19, indoda / i-Xam (eNorthern Cape San) kanye nomunye waseLesotho ngokuzimela bachaza inkolelo yabo kumuntu okuthiwa u-Kaggen noma u-Cagn. / U-Kaggen wayengumculi ohlangene nomdali - onamandla futhi ngezinye izikhathi onomusa, kodwa okwazi ukwenza izinto ezimbi, ezinonya nezisiphukuphuku.
Kwacatshangwa ukuthi wadala i-eland, isilwane esivela kakhulu emidwebo yaseLwandle laseNingizimu Afrika. I-Kalahari San inesibalo esifanayo sokukhohlisa emasikweni abo okulandisa. IJu / 'hoasi ichaza unkulunkulu omkhulu nomncane, owayekade ehlotshaniswa nokuphila nelanga elinyukayo, lolokugcina nokufa nangasentshonalanga. Inkolelo eyayibonakala ngokusobala yayiwukuthi, lapho umhlaba uqala ukudala, izilwane zazingabonakali kubantu bokuqala.
Laba bantu babengakabi namasiko nemikhuba. Ngemva kokudalwa kwesibili kwakungabantu futhi izilwane zihlukanisiwe, futhi abantu bafunde ukugcina ikhodi yezenhlalo. Ezinye izinkolelo nezindabuko, mhlawumbe zesikhathi esidala, nazo zatshelwe kabanzi. Izinkolelo mayelana nokufa azifaneli.
Ngasekupheleni kwekhulu le-19, indoda efanayo / i-Xam yachaza ukuthi ekufeni inhliziyo yomuntu yafika esibhakabhakeni, lapho yaba yinkanyezi. Phakathi kwamuva nje kweKalahari San futhi, inkanyezi yokudubula yayihlotshaniswa nokufa komuntu. Enye iSan yaseningizimu (ukuletha imvula) noma isikhala esibi (esomile) ngesikhathi sokuzalwa, futhi ivuselelwa futhi ekufeni.
Ukwenza imvula kwakuyingxenye ebalulekile yenkolelo yeSonto yenkolo neningizimu. I-Xam yeNyakatho Kapa (ulimi lwayo kanye nobumbano lwamasiko ayisekho) luchaza 'abenzi bemimoya', kanye 'nabatshakathi bokudlala' kanye 'nabathakathi bokugula' (abaphulukisi). Izinkolelo zenkolo ezaziwa emaqenjini amaningi ahlukene e-San njengamanje zicatshangwa ukuthi zibalulekile ekuqondeni i-rock art yaseningizimu ye-Afrika.